Manolotra soso-kevitra maimaim-poana ny Semalt
Ny SEO Spider Tool dia dikan-teny vaovao mivaingana ary manaparitaka fampiharana mamela anao hamantatra ny tranonkalanao ary mametaka ireo singa manan-danja eo an-toerana, izay mahatonga anao ho mora ny handinihanao ny pejy SEO sy pejy an-tserasera. Afaka mandefa maimaim-poana ity programa ity ianao na misafidy ny drafitra avoakany mba hahazoana tombontsoa avy amin'ny fisehony.
Inona no azonao atao amin'ny SEO Spider Tool?
Tsy toy ny programa fampiasana ordinatera na singa hafa mahazatra ny SEO Spider Tool dia mavitrika, haingana ary mora ampiasaina, ary mamela anao hamakafaka ny valiny amin'ny fotoana mahamety azy. Manangona ny angon-drakitra izy, mamela ny CEO handray fanapahan-kevitra momba izany. Ny tombony sasany dia voafaritra etsy ambany.
1 - auto õlivahetus. Mitadiava rohy mifototra
Mampiasa ny SEO Spider Tool, azonao atao ny mahita rohy tapaka ao amin'ny tranonkalanao ary ataovy mora kokoa ny manaparitaka ny pejy Internet anao. Ity programa ity dia mikapoka toerana iray avy hatrany ary mahita rohy toy ny 404. Ankoatra izany, manamboatra ireo rohy tapaka izy ary manampy amin'ny fitadiavana ny fahadisoana amin'ny server. Noho izany, ny SEO Spider Tool dia fitaovana iray manontolo amin'ny angona angon-drakitra sy fitaovana fitiliana amin'ny tranonkala. Mahita URL izy ary manamboatra azy ireo ho anao avy hatrany.
2. Fakafakao ny lohatenin'ny pejy sy ny Meta Data
Azonao atao ny mamakafaka ny lohatenin'ny pejy sy ny metadata mandritra ny fizotry ny fikikisana. Ny SEO Spider Tool dia manara-maso ny kalitaon'ny famaritana meta ary mamaritra ny fahadisoana, teny tsy hita, fohy na lava lava na votoaty duplicate ao amin'ny tranonkalanao.
3. Extract Data miaraka amin'ny XPath
Ankehitriny dia afaka manangona mora foana ny angona avy amin'ny HTML amin'ny tranonkala mampiasa ny SEO Spider Tool. Ny CSS Path sy ny XPath dia mahatonga ny asa ho mora kokoa sy tsara kokoa noho ny fampisehoana angon-drakitra sy fandaharana hafa mitovy amin'izany. Ity fitaovana ity dia manangona vaovao avy amin'ny tags etsy, lohateny, tranonkala fialan-tsasatra ary mahazo anao ny angon-drakitra tsara ao anatin'ny minitra vitsy.
4. Mamolavola Sitemaps XML
Ny tombony hafa amin'ny fampiasana ny SEO Spider Tool dia mamorona sitemap XML ho an'ireo mpampiasa ary tonga miaraka amin'ny fanitarana fanovana. Azonao atao ny manova ny haavony sy ny fandefasana haingana ny tranonkalanao ary hahatsara kokoa ny isany. Ankoatra izany, ity fitaovana ity dia manolotra karazana sitemap samihafa hisafidy.
5. Ampifandraiso amin'ny kaonty Google Analytics
Azonao atao ny mampifandray na mampifandray ny SEO Spider Tool amin'ny kaontinao Google Analytics ary haka ireo angona ilaina, hanatsarana ny taham-pitenenana, ny resadresaka ary ny fivoriana ao amin'ny tranonkalanao.Raha vantany vao voarakitra tanteraka ny angona, ity fitaovana ity dia mamoaka azy ary hanampy anao hamoaka vola amin'ny Internet.
Ankehitriny dia mora ho an'ny olona ny mijery ny URL voasakana amin'ny robots. txt, X-Robots tari-dàlana sy meta robots, noho ny SEO Spider Tool mba hahafahana manao izany. Manamboatra ny URL tapaka izy ary manomboka avy hatrany ny valiny tianao.
7. Fidio ny votoatin'ny dika mitovy
Azonao atao ny mamantatra mora kokoa ny pejy Internet amin'ny Internet amin'ny fampiasana ny SEO Spider Tool. Ny votoatin'ny dividalana ampahany dia novolavolaina automaty. Ny Tool SEO Spider dia manamarina ny lohateninao, ny votoatiny sy ny filazalazana momba ny kalitao, ka manjary azo antoka fa tsy misy pejy amin'ny tranonkalanao no alefa amin'ny Internet.
8. Fanamarinana ny mpilatsaka an-tsitrapo
Raha te hijery ny tranonkalan'ny mpifaninana ianao ary te hahafantatra ny karazan-daka nataony dia tokony hanandrana ny SEO Spider Tool. Io no hany fandinganana tranonkala amin'ny tranonkala sy fandaharana fandraketana an-tserasera izay ahafahanao mampitaha ny isa miaraka amin'ny mpifaninana ary manome fampahalalana ilaina avy hatrany.